Shir aan caadi aheyn oo xasaasi ah oo ka dhacay Madaxtooyada (Yuu u dhexeyay?) |
Shir aan caadi aheyn oo xasaasi ah oo ka dhacay Madaxtooyada (Yuu u dhexeyay?)
Kulan ay isugu yimaaden Wasiiro, Xildhibaano, Siyaasiyiin Saraakiil Ciidan ayaa waxa uu ka dhacay Xarunta madaxtooyada Somalia.
Kulanka oo ahaa mid gaar ah ayaa waxaa looga hadlaayay arrimo ay kamid ahaayen Amaanka, Siyaasada iyo sida Somalia loogaa sifeyn lahaa Xoogaga argagixisada Somalia ee Al-shabaab.
Kulanka ayaa ahaa mid uu marti galiyay Madaxweynaha Somalia, kaasi oo leysu weydaarsanaayay afkaar kala duwan ayaa waxa ay mas’uuliyiintaasi isla garteen in Somalia ay dib u marti galineyso awoodaha Maleeshiyaadka Al-shabaab waxa ayna walaac ka muujiyeen in goobaha ay dib ula wareegayaan Al-shabaab.
Inta uu kulanka socday ayaa waxaa goobta ka hadlay tiro mas’uuliyiin ah oo sheegay in laamaha amaanka ay uga fadhiyaan wax ka bedelka qalqal galinta ay Maleeshiyaadka Al-shabaab kawadaan Gobolada dalka xili laga soo miyay in magaalada Muqdisho ay dhibaato ka geystaan inta lagu guda jiro Bisha barakeysan.
Sidoo kale, Mas’uuliyiintaasi ayaa isla soo qaday doorashadii ka dhacday Magaalada Cadaado oo lagu doortay C/kariin Xusein Gulleed oo saaxiib dhow la ah Madaxweynaha Somalia Xasan Sheekh Maxamuud.
Waxa ay sheegen in doorashadu ay aheyd mid taariikhi ah, balse DF Somalia looga fadhiyo in halkaasi ay u daabusho ciidamo isugu jira Militeri, Boolis iyo Nabadsugid si loo xaqiijiyo amaanka Mas’uuliyiintaasi.
Dhanka kale, Saraakiisha goobta ku sugneyd ayaa ballan qaaday inay sameynayaan qorsho ay Ciidamo ku siinayaan Maamulka cusub ee Galmudug.